သွပ်သွင်းခြင်း Prefab စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိဂိုဒေါင်ထုတ်လုပ်သူ - China Qingdao Xinmao ZT Steel
စျေး ၀ ယ်ထွက်ရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောဇိမ်ခံပစ္စည်းတင်ပို့သည့်ကွန်တိန်နာအိမ် ...
ပေ ၄၀ အမြင့်ရှိဇိမ်ခံပစ္စည်းတင်ပို့သည့်ကွန်တိန်နာအိမ်ကို ...
3 အိပ်ခန်း Flat Pack ကွန်တိန်နာအိမ်၊ အိမ်
Prefabricated Flat Pack ကွန်တိန်နာ House F ...
အလုပ်သမားရုံးအတွက်အိတ်ဆောင် Flat Pack ကွန်တိန်နာအိမ်
အိတ်ဆောင် Flat Pack ကွန်တိန်နာအလုပ်သမား ...
Prefabricated galvanized သံမဏိကိုယ်ထည်ကြက်မွေးမြူ Chi ...
Prefab Prefabricated သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်တစ်ခါသုံးခွဲစိတ် N95 မျက်နှာဖုံး
မြန်လျင်မြန်စွာတပ်ဆင်နိမ့်ကုန်ကျ prefabricated ဂိုဒေါင် s ...
China Qingdao ဒါရိုက်တာသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ...
Prefabricated H Beam သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး မင်္ဂလာဆောင်ခန်းမ ...
က ISO လက်မှတ်က ISO Standard သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ Worksho ...
တရုတ်လက်ကားအမြင့်အကြိုထည်သံမဏိ Struc ထလော့ ...
ထိပ်တန်းအရည်အသွေး H ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်အကြံအဖန်တွေချည်းသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ wo ...
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Prefab စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိသိုလှောင် ...
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ Worksho ၏ Professional ကထုတ်လုပ်သူ ...
သွပ်ရည်စိမ် Prefab စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိဂိုဒေါင်ထုတ်လုပ်သူ
Galvanized Prefab Prefabricated သံမဏိဂိုဒေါင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်
သံမဏိ structures များအထူးပြုလုပ်ပါ:
1.light အလေးချိန်မြင့်မားခွန်အားကြီးမားသော span;
2.short ဆောက်လုပ်ရေးကာလ, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်;
3.easy ပြောင်းရွှေ့, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်, ပြန်သုံး;
4. ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့စက်ရုံ / စက်ရုံ / အလုပ်ရုံအဖြစ်အသုံးပြု, ဂိုဒေါင်, ရုံးအဆောက်အဦ, လေယာဉ်တင်လေယာဉ်ရုံစသည်တို့;
5.structural ကြာရှည်ခံမှု, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။
Israelသရေလအမျိုး၌ prefab သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံသစ်သားသိုလှောင်ဂိုဒေါင်
အဓိကသံမဏိ Frame က
Q235B, Q345B: Hot စာရွက်လိပ် H ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်, ထောင့်ကွက်, သံမဏိပိုက်,
သံမဏိ Beam ကို
Q235B, Q345B: H ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်, သံမဏိဒိုင်းခွေ, ရေပူစာရွက်ရှင်းပြီ
Q235B, Q345B: သံမဏိလှံတံ, သံမဏိပိုက်, Angle သံမဏိ
C သို့မဟုတ် Z ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်, သံမဏိ purlin
က Wall Purlin
Q235B, Q346B: C သို့မဟုတ် Z ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်, သံမဏိ purlin
လူပျိုရောင်စုံမြှောင်းပုံသံမဏိစာရွက်, EPS နှင့်အတူ Sandwich က panel က, ရော့ခ်သိုးမွှေး, PU, ​​Glass ကိုသိုးမွှေးစသည်တို့ကို,
လူမီနီယမ်အလွိုင်း-Glass ကို, လူမီနီယမ်အလွိုင်း-ရှပ်တာ, PVC
လျှောသို့မဟုတ် Rolling တံခါးကို
PVC ပိုက်, အရောင်သံမဏိပိုက်
အရောင်သံမဏိစာရွက်အထူ 0.5mm ထား
20 တန်ချိန်5တန်ချိန်အတွက် crane
၁။ ကုန်ကြမ်းများကိုပြင်ဆင်ပါ။ သံမဏိပြားကိုဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရွယ်အစား H အပိုင်းသံမဏိနှင့်ထောင့်သုံးသံမဏိ၊ ပတ် ၀ န်းကျင်၊ သံမဏိပတ်ပတ်လည်၊ စတုရန်းပြွန်စသည်တို့ကိုအသုံးပြုပါ။
၂။ နှင့်ဂဟေဆော်ခြင်း - ရန် အတူတကွတစ်ခုလုံးကိုရောင်ခြည် / ကော်လံ / သတ္တုအထိမ်းအချုပ်အဖြစ်အတူတကွ
(ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးသူသည်သံမဏိအပိုင်းအစများကိုစစ်ဆေးပြီးသွားသည်။ ဤသည်မှာပထမအကြိမ်ဖြစ်သည်။ )
၃ ။ သဲပေါက်ကွဲမှု - အပြီးသတ်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အရောင်တင်ခြင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏သဲပေါက်ကွဲမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၂.၅ အဆင့်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ သံချေးတက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ (ဒုတိယအရည်အသွေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း)
၄ ။ သုတ်ဆေး: သဲပေါက်ကွဲမှုပြီးနောက် ၂ နာရီအတွင်းသံမဏိအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးဆေးသုတ်ရမည်။ ဖောက်သည်သည်မည်သည့်အရောင်နှင့်မည်သည့်တံဆိပ်မဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ (တတိယအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု)
၅။ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဖောက်သည်အားစစ်ဆေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ကြံခြင်းအလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြီးဆုံးသွားသောအခါသံမဏိဘောင်ကိုမထုပ်မီကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရန်ဖောက်သည်များကိုဖိတ်ပါမည်။
၆။ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ခြင်း။ အကယ်၍ ဖောက်သည်များကကုန်ပစ္စည်းများကိုအနီးကပ်ကွန်တိန်နာများဖြင့်တင်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလိုအပ်ပါကသံမဏိမြင်းပေါ်၌သံမဏိကိုယ်ထည်တစ်ခုချင်းစီကိုထုပ်ပြီးသံမဏိအထုပ်တစ်ခုလုံးကိုကောင်းစွာချည်နှောင်ရမည်။
( စတုတ္ထအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း) ပင်မသံမဏိကိုယ်ထည်သည် 40 40 OT၊ ခေါင်မိုးနှင့်နံရံ panel ဝန်များတွင် 40 in HQ တွင်ဝန်ထုပ်ပိုးစရာမလိုဘဲဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူသူများအားတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်တစ်နေရာတည်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အိမ်ရာဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာများနှင့်လုပ်သားများကိုလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ပြည်ပသို့ပို့နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Qingdao Choose Xinmao ZT Steel Construction Co., Ltd.
၁။ သမိုင်းနှင့်ရှည်လျားသောသံမဏိကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံအတွေ့အကြုံ -
အေ 15 + နှစ်ပေါင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ, အတွေ့အကြုံများ
ခ 600 + စီမံကိန်းများကိုအတွေ့အကြုံကို အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာ။
C. နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးတည်ထောင် 20 အထက်နိုင်ငံများတွင်:ပါကစ္စတန်၊ ဆူဒန်၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ တိုဘာဂို၊ အဘူဒါဘီ၊ ယီမင်၊ ဂျမေကာ၊ အီကွေဒေါ၊ ကာတာ၊ သြစတြီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ အစ္စရေး၊ မလေးရှား၊
2. အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် Professional ကထုတ်လုပ်မှုလိုင်း:
အေ 50000 စတုရန်းမီတာ စက်ရုံဧရိယာ
ခ 600 + ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားလုပ်သားများ။
C. 100 ကျော် + ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်ဂျင်နီယာများ ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းရည်နှင့်အတူ,
ဃ 10 သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ .
အီး 80+ အစုံ ကြီးမားသောတိကျသောနှင့်ပြည်တွင်း၌အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ ပစ္စည်းကိရိယာများ။
အေ ၅၀၀၀၀ တန်သံမဏိ အဓိကသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာ 20000mts, အလယ်တန်းသံမဏိ 15000mts အမျိုးမျိုးကိုသံမဏိစာရွက် 300000 စတုရမ်းမီတာနှစ်ပတ်လည်
ခ $ 40000000 နှစ်ပတ်လည်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်
C. အမြင့်ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းရည်, 20 မှ 30 ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်းအချိန်
၄။ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် -
အရည်အသွေးအများအတွက်အေက ISO လက်မှတ်, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ, လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
B.Steel ဖွဲ့စည်းပုံဆောက်လုပ်ရေးအရည်အချင်းလက်မှတ်အဆင့် II ကို။
C. SGS လက်မှတ်
30% ကြိုတင်ပေးငွေနှင့် T / T OR L / C မှပစ္စည်းမတင်မီ ။
2. Delivery အချိန်?
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ 100 ကျော်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်အပြည့်အဝဖြေရှင်းချက်ရေးဆွဲဒီဇိုင်းနိုင်ဘူး။
4. သင်နိုင်ငံရပ်ခြား site ပေါ်တွင်တပ်ဆင်လမ်းညွှန်ပူဇော်ကြသလော
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့တပ်ဆင်ခြင်း, ကြီးကြပ်မှုနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းပြည်ပမှာ 60 လူတို့နှင့်အတူတပ်ဆင်ခအဖွဲ့လမ်းညွှန်ပါပြီ။
ဖြေအခန်း 201, 32 တည်ဆောက်ခြင်း, Tian တစ်ခုဆိုက်ဘာမြို့, Chengyang ခရိုင်, Qingdao, တရုတ်
နောက်တစ်ခု: ထိပ်တန်းအရည်အသွေး H ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်အကြံအဖန်တွေချည်းသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ထိပ်တန်းအရည်အသွေး H ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်အကြံအဖန်တွေချည်းသံမဏိ Structu ...
Prefab Prefabricated သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ...
တရုတ်နိုင်ငံမှသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး သိုလှောင်ရုံ
လုပ်ကြံသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာသံမဏိ stru workshops ...
Qingdao တရုတ်ပေါ့ပါးသောသံမဏိကိုယ်ထည် ...
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားသော Prefabricated သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ...